ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးတွင် သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံအလိုက် နိုင်ငံအတွင်း မှီတင်းနေထိုင်ကြသည့် တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စု တိုင်းသည် မိမိတို့၏ အမျိုးသားရေးဝါဒအား အခြေခံကာ နိုင်ငံတော်ကို ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်နေကြပေသည်။ တိုင်းရင်း သားမျိုးနွယ်စုတို့သည် ယင်းတို့၏ လူမျိုး၊ စာပေ၊ ယဉ်ကျေးမှု ထုံးတမ်းစဉ်လာများအား ကမ္ဘာတည်တံ့နေသရွေ့ တည်ရှိခိုင်မြဲစွာ ရပ်တည်နေနိုင်ရေး အတွက် ခိုင်မာသည့် ဇွဲလုံ့လ ဝိရိယတို့ဖြင့် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ကာ ရပ်တည်လျက် ရှိကြပေသည်။
ကျွန်တော်နေတာက အေးသာယာမြို့ပါ။ ရှမ်းပြည်နယ် မြို့တော် တောင်ကြီးမြို့ရဲ့ အနောက်ဘက် ပြည်ထောင်စု လမ်းမကြီးနဲ့ သိပ်မဝေးတဲ့ နေရာပါ။ တောင်ကြီးမြို့နဲ့ အေးသာယာမြို့က ရှစ်မိုင်လောက်သာဝေးပြီး ကားနဲ့ မိနစ်နှစ်ဆယ်လောက် မောင်းရင်ရောက်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံသည် ၁၉၄၈ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီ ၄ ရက်နေ့တွင် ဗြိတိသျှအင်္ဂလိပ်နယ်ချဲ့တို့ထံမှ လွတ်လပ်ရေး ရယူနိုင်ခဲ့ သည်။ လွတ်လပ်ရေးမရခင် အချိန်က မြန်မာနိုင်ငံသည် အင်္ဂလိပ် ကိုလိုနီ နယ်ချဲ့လက်အောက် နှင့် ဂျပန်လက်အောက်သို့ နှစ်ပေါင်းရာချီ နေထိုင်ခဲ့ကြရပြီး ဆင်းဆင်းရဲရဲဖြင့် ရပ်တည်လာခဲ့ကြရသည်။
၂၁ ရာစုပင်လုံညီလာခံ နှင့် လူ့အခွင့်အရေး
နိုင်ငံတော်ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် SSR နဲ့ DDR တပ်မတော်အတွက်ရင်လေးစရာလား?
တပ်ကြပ်ကြီးဖိုးစီ facebook အကောင့်အမည်ရှိ June လ16 ရက် မွန်းလွဲပိုင်း 1:18 နာရီ ပါ post နှင့် ပတ်သက် ပြီးကျွှန်တော်၏အပြီးသုံးသတ်ချက်
MPC ဟာ လျှို့ ဝှက်အဖွဲ့အစည်းလား?
You are here: Home သတင်း ဆောင်းပါး